SONSAF | SONSAF
SONSAF waxa looga dan leeyahay waa sidii loo xoojin lahaa kaqeybqaateyaasha aan dowliga ahayn ee marka magacooda la soo gaabsho loo yaqaano (NSAs) kuwaasoo ka jira gudaha Somaliland si markaasi loo hanto siyaasada wada hadalka iyo go,aan qaadashada caalamiga ah si dabadeed loogu helo dadka Somaliland mustaqbal bad qaba oo horumar ku dheehan yahay. Waxaanu ku hadlaynaa magaca dhamaan dhulka Soomaaliland marka laga hadlaayo arimaha kusaabsan dhimitaanka faqriga, horumarka, maamul wanaaga, dimoqraadiyada, nabada iyo amniga.
Bartan internetka waxaa maal galiya Midowga Yurub. Hase ahaatee waxa ku qoran bartan internetka waxaa masuuliyadooda leh SONSAF oo qura kamana turjumayaan afkaarta Midowga Yurub.
Arbaco 12 Luuliyo, 2017
Madasha Ururada Bulshada Rayidka ee Arrimaha Doorashooyinka oo ah madal ay isugu 86 urur oo ka jira dhamaan lixda gobol ee Somaliland ayaa maalmahan shirar kala duwan ku qabtay gobolada Somaliland, shirarkaas oo loogu kuur galiyay habsami u socodka qaadasha kaadhka codbixinta.
Laga soo bilaabo 2008, SONSAF waxay ku howlaneyd sidii ay wax uga qaban lahayd meeqaamyada siyaasada iyada oo kaashanaysa shabakadaha xubnaha ka ah oo ay ka qeygalinaysay hannaanka siyaasada wada hadalka.